အင်ဒိုသင်္ချာစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ ဘလော့ထဲမှာ သင်္ကေတတွေနဲ့ မရေးတတ်လို့ မတင်ဖြစ်ဖူး။ ခုတော့ တတ်တဲ့နည်းနဲ့ paint ထဲသွားရေးပြီး ပုံအနေနဲ့ဘဲ တွဲတင်လိုက်တော့တယ်။ အခု စာအုပ်ထဲက ပေါင်းနည်း နှစ်နည်း ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနည်းက ဆယ်ပြည့်ဂဏန်းဖြစ်ဖို့နီးတဲ့ကိန်းကို အပြည့်ကိန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ပေါင်းရတဲ့နည်းပါ။
e.g, 56+38 = ??
ပထမဦးဆုံး 56 နဲ့ 38 ထဲလ ဆယ်ပြည့်ကိန်းဖြစ်ဖို့နီးတဲ့ 38 ကို အပြည့်ကိန်းဖြစ်အောင် ပေါင်းပါမယ်။
ရလာဒ် 40 ကို ကျန်ကိန်းနဲ့ ဆက်ပေါင်းပါ။
ပေါင်းလာဒ် 96 ထဲက အပြည့်ကိန်းဖြစ်အောင်ပေါင်းခဲ့တဲ့2ကို ပြန်နှုတ်ပါ။
96 -2= 94#
e.g, 65+39+87 = ??
ဂဏန်းတွေကို ဒေါင်လိုက်အရင်စီပြီး အပေါ်ဆုံးဂဏန်းနဲ့ အောက်ဆုံးဂဏန်းကို ယှဉ်ကြည့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးဂဏန်းက ကြီးမယ်ဆိုရင် အပေါ်မှ အောက်ကိုပေါင်းပါမယ်။ အောက်ဆုံးဂဏန်းက ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကနေ အပေါ်ကိုပေါင်းပါမယ်။ (မြားက ပေါင်းတဲ့ လားရာကို ပြထားပေးတာပါ။)
ခုဂဏန်းနေရာအတွက် -----> 5ရယ် 7ရယ် 9ရယ် ရှိပါတယ်။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ပေါင်းမယ့်အတွက် 7ကို 9နဲ့ အရင်ပေါင်းပါမယ်။ 7+9 = 16 <--- ရလာဒ် 10ကျော်ရင် 9အပေါ်မှာ "အစက်"လေး တစ်စက်မှတ်ပါ။ ပြီးရင် ရလာဒ် 16က ခုဂဏန်း 6ကို ဆက်ပေါင်းရမယ့်ရှေ့ဂဏန်း 5နဲ့ ပေါင်းပါ။ 6+5 = 11 <--- ဆက်ပေါင်းတဲ့ ရလာဒ် 10 ကျော်ရင်5အပေါ်မှာ "အစက်"လေး တစ်စက်မှတ်ပါ။ ကျန်တဲ့ 1 ကို ခုဂဏန်းအားလုံးပေါင်းခြင်းနေရာမှာ ရေးပါ။
ဆယ်ဂဏန်းနေရာအတွက် -----> 6ရယ် 3ရယ် 8ရယ် ရှိပါတယ်။ ခုဂဏန်းဘက်မှာ "အစက်"နှစ်စက်ရှိတာ သတိပြုပါ။ အဲဒီ "အစက်"နှစ်စက်ကို ဂဏန်း"2"အဖြစ်ယူပြီး ဆယ်ဂဏန်းနေရာက 8 နဲ့ စပေါင်းပါ။ 8+2 = 10 <--- ရလာဒ် 10ကျော်လို့ 8အပေါ်မှာ "အစက်"လေး တစ်စက်မှတ်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီရလာဒ် 10 က ခုဂဏန်း0ကို ဆက်ပေါင်းရမယ့်ရှေ့ဂဏန်3းနဲ့ ပေါင်းပါ။ 0+3 =3<--- 10မကျော်တဲ့အတွက် ရှေ့ဆက်ပေါင်းပါ။ 3+6 =9<--- ရတဲ့အဖြေကို ဆယ်ဂဏန်းအားလုံးပေါင်းခြင်းနေရာမှာရေးပါ။
ရာဂဏန်းနေရာအတွက် -----> ဆယ်ဂဏန်းဘက်မှာ "အစက်"တစ်စက်ရှိတာ သတိပြုပါ။ အဲဒီ "အစက်"တစ်စက်ကို ဂဏန်း"1"အဖြစ်ယူပြီး ရာဂဏန်းနေရာမှာ ရေးပါ။ ဒါကြောင့် အားလုံးပေါင်းလာဒ် 191 ရပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ ကိန်းအများကြီးကို ပေါင်းကြည့်ပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန်ပေါင်းနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဂဏန်းတချို့ကို ပေါင်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ပေးထားတဲ့ အဖြေနဲ့ တိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
e.g,(1)---> 97+81+73+32 = ???
e.g,(2)---> 5784+3325+7809+4537 =???
e.g,(3)---> 4541+2782+5917+7876 =???
e.g,(4)---> 78253+46328+50964+78195 =???
e.g,(5)---> 33885+76293+48725+36450 =???
ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ ကိန်းအများကြီးပေါင်းနည်းက Calculator ရှာမတွေ့ရင် အတော်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ပွစာကျဲနေတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေပေါင်းတာ ခေါင်းမမူးဘဲ မြန်မြန်ပေါင်းလို့ရလို့ သဘောကျမိပါတယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 1:42 PM
အဟိ.. အတွက်အချက်က တော်လွန်းလို့ အမလည်း တော်ယုံဆိုရင် Calculator မရှိရင် ဦးနှောက်က အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး.. ကွန်ပျူတာက excel လေး ပြေး ဖွင့်ပြီး တွက်လိုက်ရမှ.. တကယ့်တကယ် စိတ်တွက်ဆိုရင် ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး။ ညီမလေး ပြောပြပေးထားတဲ့ နည်းတွေကို အရင် တွက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်..